Bayaan laga soo saaray nadwo Cilmiyeedkii 9aad ee lagu qabtay Magaalada Qardho
July 2, 2012 - Written by Qardho:-Nadwo cilmiyedka 9aad eeka socda Masjidka Cumar Bin Khadhaab oo xalay la soo gaba gabeeyay waxayna culimadii ka qeyb galeysay soo saareen Bayaan ay uga hadlayaan xaaladaha Dacwadeeda , deegaan iyo kuwo kale wuxuuna bayaankii u qoraa sidan
Bayaanka Gunaanadka Nadwada 9-aad ee ka Dhacday Magaalada Qardho 02/07/2012
Ilaah baa mahad leh, nabadgelyo iyo Naxariis Nabigeennii Muxammad ahaa, eheladiisii, asxaabtiisii, atbaacdoodii iyo intii wanaag ku raacday tan iyo qiyaamaha dushooda ha ahaato.
Intaa ka dib waxaan Ummadda ugu baaqaynaa arimaha soo socda:-
1. Dastuurka Ummadda
A) Waxaan ummadda ugu baaqaynaa in Dastuurkoodu yahay Kitaabka alle iyo Sunnada nebiga wixii khilaafa labadaas asalna uu dastuur Baadil ah yahay.
B) Waxaan Ummadda ugu baaqaynaa inay ka fogaadaan ku dhaqanka wax kasta oo diintooda ka hor imanaya kana yeelan Dastuur dhaqan.
C) Waxaan umadda ugu baaqaynaa inay diidaan dastuur kasta oo khilaafsan Dastuurka ummadda Muslimiinta ah oo aan waxba ka tegin lagana digtoonaado Dastuurada caqliga baniaadamku fekeray oo jaahwareerinta badani ku jirto.
2.Dacwadu Waa Mas,uuliyada qof walba oo muslim ah laga rabo
A) Waxaan usoo jeedineynaa dadka ku abtirsada dacwada salafiga ah inay ka run sheegaan qaadashada kitaabka iyo sunnada, kuna dhaqmaan manhajka Salafka caqiido ahaan, cibaado ahaan, dacwa ahaan iyo akhlaaq ahaan intaba.
B) Waxaan ugu baaqaynaa dulaabta barata cilmiga sharciga ah inay uga faa,idayaan cilmigooda ummada xilna iska saaran gudbinta dacwada salafiga ah.
C). Waxaan usoo jeedinaynaa dhamaan dadka muslimiinta inay iska kaashadaan kor u qaadista diinta Islaamka iyagoo adeegsanaya Maskaxdooda & maalkooda labadaba.
D)Waxaan ugu baaqeynaa culimada iyo ducaadda inay xoojiyaan faafinta manhajka salafka Dhinaca dacwada, ka fogaanshaha gaalaysiinta muslimiinta iyo xoojinta inay dhalintu ku xirnaato culimada.
E)-Waxaan caddaynaynaa in gaalaysiinta muslimiinta iyo bannaysiga dhiiggoodu uusan waafaqsanayn waddadii nabi Muxamed (scw), taas oo ah mid uu ummaddiisa uga sii digay, isla markaana aan waafqasanayn dhaqankii salafka iyo culumada muslimiinta. Shacabka Soomaaliyeedna waxaan uga digeynaa inay ku dagmaan afkaartaas khatarta ah.
F)-Waxaan ugu baaqeynaa dadka ku hawlan faafinta dacwada inay xoojiyaan walaalnimadooda, iskaashigooda iyo midaynta mawaaqiftooda, isla markaana ay si gaara isaga kaashadaan xal u helista mashaakilka ummadda haysta.
3. La dirirka Dhaqamada xun xun ee Ummadda kusoo badanaya.
A) Waxaan Umadda ugu baaqaynaa inay ka fogaadaan dhaqamada xun xun ee Sharcigu xaarimeeyey ku dhaqankooda sida sinada, Khamriga, Qaadka , Burcad badeednimada iwm.
B) Waxaan umadda u cadaynaynaa ku dhaqanka dhaqamada xun xun inay yihiin halaaga ummada lagana dhaxlayo caaqibxumo ummadaasi ku dambayso.
C) waxaa ummada u sheegaynaa inay waxyaalahaas shareecadu xarimtay cid kasta oo samaysana la kulmayso ciqaab rabbi.
D) Waxaan Umadda usoo jeedinaynaa in meel looga soo wada jeesto suulinta Dhilaysiga oo keentay Dhibaatooyin fara badan iyo weliba cuduro aad u faafaya sida cudurka AIDSka oo goboladan tiro badan lagu sheegay, Burcad badeedka iyo waxyaalaha caqliga Dooriya sida Xashiishada , Khamriga iyo Qaadka oo deegaanka aad u Saameyey keenayna fasaad badan sida dilalka iyo fowdada.
4. Ka hortegista leexashada dhinaca Caqiidada
A) Waxaa ummadda ugu baaqaynaa inay bartaan kuna dhaqmaan caqiidada AhluSummah wala jamaaca ee Saxiixa kana fogaanaadaan Bidacda iyo khuraafaadka aan diinta islaamka meelna kasoo gelin.
B) Waxaan ummadda ugu baaqaynaa inay ka fogaadaan xadgudubka diiniga sida gaalaysiinta ummadda Islaamka, xadgudubka xafladaha loo sameeyo nebiga Iwm.
C)Waxaan ummadda ugu baaqaynaa ku xirnaanta culimada Xambaarsan caqiidada saxa ah iyo ka fogaanshaha hawo raacnimada.
5. Ilaalinta Deegaanka iyo masaalixda Caamka ah
A) Waxaan ummadda ugu baaqaynaa ilaalinta deegaanka sida ka fogaanshaha gubida Dhirta, Seeraysiga iyo Xirida wadooyinka.
B) Waxaan ummadda ugu baaqaynaa in meel looga soo wada jeensado dadka yar ee dhibta ku haya deegaanka sida gubida Dhuxusha, Jarida cawska Iwm.
C) Waxaan Ummada ugu baaqaynaa in la ilaaliyo Bilicda magaalooyinka oo ay ugu horeyso in laga ilaaliyo wasakhda meel walba la dhigayo iyo wadooyinka la degayo ama lagu xirayo Dhagxaanta iyo ciida aana lahayn meel la maro.
D) Waxaan Ummada ugu baaqaynaa in laga fogaado ugaarsiga Duurjoogta sida Gorayada, Juglayda , Sagaarada iwm iyadoo aan baahi loo qabin.
6. Amnigu waa nolosha Bulshada:
A) Waxaan ugu baaqaynaa Maamulka iyo Dhamaan dadweynaha reer qardhood inay meel uga soo wada jeestaan cid walba oo lid ku ah amaanka deegaanka.
B) Waxaan u cadaynaynaa ummada in amnigu yahay tiirka nolosha Bulshada una baahan yahay in Ummada oo dhami hagaajintiisa iska kaashadaan.
Gabagabadii waxaan Ilaahay ka baryaynaa in uu diinta inaku sugo, ummadda Soomaaliyeedna ka dulqaado dhibaatooyinka muddada dheer ku habsaday, uuna waafajiyo danahooda adduun iyo aakhiro. Allow amiin… Aamiin
1. Sh. Xasan Maxamed Muuse (Xasan Bookh)
2.Sh. Maxamuud Sh. Axmed Xasan
3.Sh. Axmed-Daahir Xasan Xuseen
4.Sh. Maxamed Macalin Axmed
5.Sh. C/naasir Xaaji Axmed
6.Sh. C/qaadir Nuur Faarax
7. Sh. Cali Maxamed Cali
8. Sh. Axmed Yuusuf Daad
9. Sh. C/qaadir Yaasiin Maxamed
10.Sh. Maxamed Ismaaciil Foodcade
One comment on “Bayaan laga soo saaray nadwo Cilmiyeedkii 9aad ee lagu qabtay Magaalada Qardho”	Abdinasir on July 3, 2012 at 5:44 pm said:
Maashaa Allaah waa bayaan dhaxal gal ah, Ilaahay wadada khayrkaa hanatuso. Culumada Ilaahay hanoo xifdiyo cilmigoodana hanagu anfaco.